musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mexico Kuputsa Nhau » Dutu guru Olaf rinotarisa kuMexico
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • Resorts • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Hurricane Olaf achisvika-mifananidzo neruremekedzo rweThe Weather Channel
Hurricane Olaf iri kuunza mhepo yayo ine simba uye kunaya kwakanyanya kuBaja California peninsula kuMexico manheru ano uko nzvimbo dzekudyira dzakakura munzvimbo iyi.
Sekureva kweUS National Hurricane Center, iyo chamupupuri-ine simba mhepo ye105 mamaira paawa uye kunaya kwemvura inonaya kusvika pamasendimita gumi nemashanu inogona kugara mukati mehusiku.
Hurricane Olaf inotarisirwa kunanga kuchamhembe-kuchamhembe kwakadziva kumadokero uye inogona kusimbisa isati yarova mahombekombe egungwa.
Zviteshi zvengarava zvakavharwa kwekanguva uye dzimba dzakavhurwa. Vemabhizimusi vakakwira pamahwindo apo vanhu vakamirira mumutsetse kutenga grocery uye zvekushandisa kuzvitoro.
Saka kana COVID-19 yaita zvimwe chinhu chakanaka, zvakakonzera mazhinji emahotera kuti ave neisingasviki makumi mana muzana% yevaenzi kunzvimbo yekuenda, vanozogara panzvimbo.
Sekureva kweUS National Hurricane Center, iyo chamupupuri-ine simba mhepo ye105 mamaira paawa uye kunaya kukuru kwemvura kusvika pamasendimita gumi nemashanu kunogona kugara mukati mehusiku kunogona kukonzera mafashama nemafashama.
Mutungamiri weLos Cabos Hotels Association, Lilzi Orci, akataura kuti 37 ndege dzekumba nedzepasi rose dzakamiswa, uye akafungidzira zviuru makumi maviri evashanyi vekunze vaive munzvimbo iyi.
Sezvo husiku hunopera, Dutu Olaf rinotarisirwa kunanga kuchamhembe-kuchamhembe kwakadziva kumadokero uye rinogona kusimba risati rasvika kumahombekombe.
Maererano National Hurricane Center, Olaf anofanirwa kufamba achienda padyo kana pamusoro pechikamu chekumaodzanyemba cheBaja California Sur manheru ano neChishanu. Dutu remhepo rakatanga mukati mechikamu chekumaodzanyemba kwenzvimbo yekuyambira yedutu manheru ano uye ichapararira kuchamhembe kusvika Chishanu.
Mvura zhinji ine chekuita neOlaf inotarisirwa kumatunhu ekumaodzanyemba kweBaja California Sur kusvika Chishanu. Izvi zvinokonzeresa kutyisidzira kwemafashama akakosha uye anotyisa ehupenyu uye madhaka.
"Olaf dutu riri kuwedzera kuwedzera, mafungu arikurovera padhuze neMontageLosCabos. Olaf akakura kuzvimba nemhepo zvichisimuka. ”
Iyo yazvino kuvandudzwa paNational Oceanic uye Atmospheric Administration hurumende agency webhusaiti inoti:
Mifananidzo kubva kuRadar yeMexico kuCabo San Lucas, pamwe nemifananidzo yesataneti, inoratidza kuti ziso raOlaf rave kuda kudonha padyo neSan Jose del Cabo, uye kuti mamiriro echamupupuri ari kuchamhembe kwakadziva kumadokero eziso akatopararira kumahombekombe.
Iwo eyewall gore kumusoro kwakatonhora mukati maawa mashoma apfuura, uye iyo chinangwa kusimba fungidziro kubva kuCIMSS ADT maitiro yakawedzera kusvika 90 kt. Kubva pane izvi uye kuwedzera kwesangano reziso pamifananidzo yeCabo radar, simba rekutanga rinowedzerwa kusvika 85 kt.
"… Kuma7: 40pm muSan Jose del Cabo, payakatanga kubvaruka, asi simba risati radzima."
Iyo yekutanga kufamba ndeye 325/10. Olaf anofanirwa kuenderera achifamba kuchamhembe kwakadziva kumadokero kuenda kuchamhembe-kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwemaawa anotevera gumi nemaviri kusvika gumi nemana, nepakati ichifamba padyo kana pamusoro pechikamu chekumaodzanyemba cheBaja California peninsula panguva ino. Mushure meizvozvo, iyo yepakati-nhanho gomo rinotambanudzira kumadokero kubva kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweUnited States inofanirwa kukonzera Olaf kutendeukira kumadokero, uye izvi zvinofanirwa kuteverwa nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kufamba sezvo dutu rinopera simba richitungamirirwa nekudzika kwakadzika kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva.
Nhungamiro yekufungidzira yakachinja zvishoma kubva pazano rakapfuura, uye iyo nzira yekufungidzira nyowani ine zvigadziriso zvidiki kubva pane fungidziro yapfuura.
Kupera simba zvishoma nezvishoma kunotarisirwa mukati memaawa makumi maviri nemana ekutanga Olaf achibatana neBaja California peninsula. Kana chamupupuri chikatendeuka chakananga kumadokero mushure memaawa makumi maviri nemana, chinofanira kufamba pamusoro pemvura inotonhorera uye voita mhepo yakaoma. Iko kusanganisa kunofanirwa kukonzeresa kuti convection iore, nesisitimu ichive yepashure-tropiki yakaderera nemaawa makumi matanhatu uye vakasara vakaderera nemaawa makumi manomwe nemaviri. Kufungidzira kutsva kwesimba kune dzimwe shanduko diki kubva pane fungidziro yapfuura, uye iri pakati peiyo envelopu yekutungamira.
Mexico yanga ichinetseka kuenda nayo nguva pfupi yadarika. Mazuva maviri chete apfuura, a Kudengenyeka kwenyika 7.1 kwakarova Acapulco.